Diyaargarowga Mashruuca wuxuu ka Bilaabmay Bursa Associate | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaDiyaargarowga Mashruuca wuxuu ka Bilaabmay Bursa Associate
16 / 02 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
u diyaargarowga mashruuca wicitaanka ee bursa
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay bilawday diyaarinta mashruuc loogu tala galay kaabayaasha iyo hormarinta qulqulka, iyo sidoo kale howlo ku lug leh isgoysyada iyo buundooyinka ee degmada anyaağrışan ee Mudanya.
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, oo la kulmay hogaamiyaasha xaafadaha dhamaan degmooyinka oo dhagaystay dhibaatooyinka ayaa gacantooda koowaad, wuxuu baaray dhibaatooyinka laxiriira kaabayaasha, hagaajinta socodka iyo iskuxirka wadada Mudanya kulanka gudoomiyaha madaxa tuulada Mudanyalı Ahmet Gün. Imaatinka Çağrışan oo uu weheliyey Madaxa Waaxda Gaadiidka Gazali Şen iyo Qeybta Zingeri iyo Magaalooyinka Murat Akdaş, Madaxweynaha Aktaş waxaa soo dhoweeyay Ahmet Günr. Markuu arkay dhibaatooyinka la xiriira kaabayaasha, hagaajinta socodka iyo dib u dhiska, Madaxweyne Aktaş wuxuu sidoo kale baaritaano ka sameeyay agagaarka isgoyska xaafada, kaas oo loo qorsheeyay in loo dhiso bar bilow ah oo wadada Mudanya.
Isagoo warbixin ka bixinaya howlaha qorsheysan ee gobolka ka dib baaritaanka, Duqa Aktaş wuxuu sheegay inay arkeen dhibaatooyinka la xiriira kaabayaasha, gaadiidka iyo dib-u-soo-celinta oo uu muujiyey Madaxa Gobolka Ahmet Gün kulanka muhaajiriinta. Isagoo xusuusinaya in kormeerayaasha cutubyada ay quseyso ay sidoo kale joogaan Çağrışan, Duqa magaalada Aktaş wuxuu yiri, “Dhibaatadu waa halkaan; Waxa jira tuulooyin iyo guryo la dhisay dib-u-dhiska maxalliga ah xilligii howlaha guud. Waxaa jira aag dejin tuulo. Waxaa jira mashruucyo dugsi iyo dugsiyo kaladuwan oo leh waqti oggolaansho. Waxaa gobolka ka jira 5-6 dugsiyo gaar loo leeyahay. Markaad tixgaliso dhamaan kuwan dhamaantiis, waxaa jira dhibaato wareegga xun, jahwareer ayaa jira. Dabcan, waxaa loo sameeyay hurdi sanado ah. Waa lagama maarmaan in la isu keeno dhammaan kuwan oo dhan sidii kaabe ahaan, dhaqan dhisme iyo waddo. Waxaa sidoo kale jira shaqooyinka wadada. Waxaan sidoo kale ogeysiin doonnaa ogeysiiska lagama maarmaanka u ah dadka. Waxaan rajeyneynaa, waxaan dooneynaa iyaga in lagu abaabulo codsi aad u culus oo qaali ah. Laakiin waxaan rabaa inaan muujiyo tan gaar ahaan. Waa xaqiiqo lama huraan ah in dhammaan muwaadiniinteennu ay u dhaqmaan si waafaqsan xeerarka aagagga. Haddii ay sidan ula jaanqaaddo, waxay shaqadeena u fududayn doontaa. Sababta oo ah waxaad leedahay kaabayaal aad u daran, hagaajinta socodka iyo qiimaha buundooyinka iyo isgoysyada. Waxaan rajeyneynaa, inaan naqshadeyn doonno oo aan shaqeyn doonno waqti gaaban. Dhanka kale, waxaan fileynaa warkii ka soo baxay iskaashiga dowladeed iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka socda wadada weyn, maaddaama howsha wadooyinka sidoo kale ay u dhigmayso gobolkan, waxaan ku soo gudbinay codsi. Sida iska cad, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro waxyaabaha ka soo baxa shaqadooda iyo shaqadan. Waxaan rajeynayaa in howsheena ay faa'iido u yeelan doonto gobolka mar hore. ”
Diyaargarowgii Sarıkamış ee xilliga xagaaga
Mashruuca Degmada Ihra Square - Mashruuca Ulubağ Cable Carwada Diyaarinta Diyaarinta Bilowga
IZBAN Cumaovası Torbalı Tepekoy Isku Diyaarinta Qodobka Qandaraaska Qandaraaska Bilaabmay
Diyaargarow hordhac ah oo loogu talagalay Kanal Istanbul ayaa bilowday
U Diyaargaroobidda Joojinta La bilaabay Bar Street
IMM waxay bilowday diyaargarowga dhibaatada jiilaalka si looga hortago khalkhalka gawaarida
Xarunta Suuq-geynta Karaman Xarumaha Diyaarinta Dhismaha Dhismaha ayaa bilaabmay
Bandhig Faneedka Caalamiga Alanya
Ogeysiiska Soo Iibsiga: Agabka ayaa la iibsan doonaa (Nidaamka culeyska birta ee khafiifka ah
Diyaargarow Sannad Cusub Xarunta Dhexe ee Cibaadirta